Chiedza - Kuita bonhora kunorevei uye munhu anozviita sei?
Kuita bonhora | kujekesa
Kuita bonhora kune varume sei?
Kuita bonhora kunevakadzi sei?
Pakupedzisira, pfungwa inonyanya kukosha yekuita bonhora ndeyokuti yakakwana zvachose. Kuita bonhora kunyange kune mhuka yemhuka, saka hachisi chinhu chokunyara nazvo. Mukuwedzera, munhu mumwe nomumwe ari munhu oga, kureva kuti, hakusi kamukira yevose.
Chii chinorehwa nekuita bonhora?
Nokudaro, zvinhu zvose zvinofananidzira kuzvigutsikana, izvo zvinoita kuti munhu afare, asina shamwari. Izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nokushandisa maoko ako pachako kana zvimwe zvepabonde, zvinowanzobatsirwe nemafungiro asina kunaka, mabhuku, mifananidzo kana mafirimu.
Kuita bonhora kunokwanise chinangwa chinokosha mukukudziridza kwayo, kunyanya kune vechidiki: Nokutsvaga chido chako, vanosimbisa ukama hwakanaka nemuviri wavo pavanenge vachiri kuyaruka uye nokudaro vanodzidza zvido zvepabonde zvavari. Mukuwedzera, mukuita bonhora, uyewo panguva dzepabonde, mahomoni anofara anosunungurwa, kuitira kuti anogonawo kubatsira kuderedza kushungurudzika.
Kuita bonhora kwevarume kune nyore. Kune varume vakawanda, zvakakwana kukurudzira peni kusvika pakuguma. Nokuda kwechinangwa ichi, shaft yakafukidzwa neruoko rumwe, simba rekubata rinowirirana zvachose pane zvaunoda, uye kukodzera uye pasi kunofambisa kunovimbisa kufara kwakarurama.
Kuita bonhora mumurume
Zvinokosha pano ndiko kushandiswa kwemafuta anobatsira kuti urege kunetseka. Kuwedzera uye tempo zvinogona kuwedzera zvishoma nezvishoma, kana zvakasiyana-siyana kakawanda.
Kunyange zvakadaro, kunewo izvo zvinonzi maitiro ekuita masturbator kune varume, izvo zvinoratidzwa mumukadzi chaiye. Iyi mapako emabharuri dzimwe nguva anonzwa achiwedzerwa, dzimwe nguva asingasviki sehupenyu, uye dzimwe nguva anowedzera akashongedzerwa nemaputi kuti awedzere kukurudzira kana kunyange nediki shoma.
Zvechokwadi, varume vanogonawo kuwedzera kufarira kwavo: Mhemberero dzakakosha dzemhemberero dzinodzivirira ropa kuti rirege kuputika kubva kune erectile tissue mushure mokuguma. Iko kukasara kunoramba kwechikamu chechipiri.
Zvinokurudzirwawo kuti urambe wakagadzirira hekecheche, mushure mezvose, haufaniri kudimburira muimba yekugeza kunze kwekupedzisira. Zvimwe nzira kubva kune vhidhiyo, somuenzaniso kushandiswa kwepuro pie kana kusina mudziyo wakachena, hazvikurudzirwi nokuda kwezvikonzero zvehutsanana nenzira. Kana iwe uchida kuisa zvinhu, iwe unofanira kungoenda kune zvekuita zvepabonde zvakakodzera, nokuti ndiyo chete chivimbo chekuti hakuna hutano hwehutano hunomuka. Mushure mokushandiswa, mabhiiyi aya anofanira kucheneswa zvakakodzera.
Kugadzirwa kwakasiyana-siyana kunovimbiswa nevarume kukurudzirwa kweP-nzvimbo, masendimita mashoma mukati mukati mekunze kwemainus. Vamwe varume vanogona kuongororwa chete kuburikidza nekukurudzirwa uku pasina kubata peni nhengo yakanyanya-orgasm-pano, inokodzera kuedza. Zvisinei, heyi nzira yakangwarira yakakodzera, nokuti anus inofanira kutanga ishandiswa kushandiswa kwakasiyana. Kuti usangane neP-nhu zvakakwana, pane zvipfeko zvakagadzirwa zvepreformed, dzimwe nguva kunyange ne-vibration units.
Chimwe chinonyanya kuwedzera chinopa hoita kwehutano hwevarume: Kurongedza nguva dzose, kungoita bonhora kana kuita zvepabonde, kunodzivirira zvinetso zveprostate mune ramangwana.
Kune vakadzi, bonhora huri nyore kwazvo, sezvo havasi mukadzi wese pakarepo anobata kune mamwe mazwi. Kakawanda kuchenesa kwakachena kwepasicic nzvimbo hakuna kukwana. Zvinokurudzirwa kukurudzira clitoris nemukadzi panguva imwe chete nokuda kwekufara kukuru-uye, kana zvichikwanisika, G-nzvimbo yacho inewo.
Kuita bonhora mukadzi
Izvi zviri pamusana wepamberi kumadziro mukati memukadzi. Anogona kuonekwa nemunwe wake, asi zviri nyore nezvimwe zvakakosha, zvepabonde zvekare. Zvinotarisirwa kuti, idzi zvemasikirwo dzinofanira kudedera zvakare, zvino kune vakadzi mukuita bonhora zvinenge zvakawanda zvemajoni zvinokwanisika.
Sezvo mutemo wega wega, kusimba uye kufamba kwechibata kunofanira kuwedzera zvishoma nezvishoma. Dzimwe nzvimbo dzisina kunaka dzemukadzi dziri nani dzinowanikwa nekuwedzera kufara, uye kubata kwavo kunonzwa kunakidza chete pashure penguva. Mukuwedzera, vakadzi vanongova mvura chaiyo kubva kune imwe nzvimbo - nokuti kutanga kungadaro kwakakodzera zvakakodzera kushandisa mafuta.
Vakadzi vazhinji vanowedzera mamwe anus kukurudzira, somuenzaniso kuburikidza nemapuranga anamato, anofadza zvikuru. Izvo zvinofanira kunge zvakasununguka uye zvakaedzwa nemafuta akawanda. Zvose zvinogoneka, hapana chinofanira kuitwa. Kunyanganisa kwakanyanya kunogonawo kuva kukurudzirwa panguva imwe chete kwevangoro, somuenzaniso nemakumbo kana zvigunwe zvemaoko.
Kune zvakawanda zvakasiyana siyana zvekuita bonhora nekuda kwevakadzi. Izvo zvakasiyana-siyana zvichibva kune dildo iri nyore kusvika kune zvinogadziriswa kune zvigadzirwa zvakakomba apo vakadzi vanogona kukwira kuenda kunopera. Muzviitiko zvakawanda, zvisinei, maoko maviri kana kuti dildo kana vibrator chete zvakakwana.
Paunoshandisa maoko iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti zvigunwe hazvina mhedziso yakatsvuka uye inofanira kuchenesa mavoko ako isati yamboita bonhora.
Kunyanya vakadzi avo vane dambudziko rokuwana orgasm mune zvepabonde zvakajairika vanobatsirwa nekuziva zviri nani nzvimbo dzavo dzisina kunaka panguva yekuita bonhora. Nehumwe ruzivo, vanogona kunyatsotaurira mumwe wavo panguva yepabonde, izvo zvikamu zvaanofanira kukurudzira nenzira ipi uye kuzviunza kumhedzisiro yakaoma.
Kutumira sexting - ngozi ine ngozi | Zvepabonde ...
Female orgasm | Zvepabonde Chiedza
Chiedza - chimiro uye basa remazamu evakadzi